महामारीका बीच बै‌ंक सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो मार्गदर्शन, के छ व्यवस्था ?
लकडाउनका समयमा बैंकको सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि केन्द्रीय बैंकले ‘बैंकको सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७’ जारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण सुरक्षित ढंगले बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
जारी मार्गदर्शनमा बैंक सञ्चालन गर्नका लागि बढीमा एक तिहाई कर्मचारी सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कर्मचारी घरमै सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
कर्मचारीहरूले न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरी काम गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीस“ग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने बैंकिङ तथा मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य सञ्चालन गर्दा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्र्दै अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्स र मास्क लगाई सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नगद दाखिला बुझिलिंदा शुरूमा शिलबन्दी बाक्सा नै बुझिलिने र केही दिनपछि मात्र गणना गरी बुझिलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नोटबाट कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने बताउ“दै राष्ट्र बैंकले संक्रमण फैलन नदिन प्राप्त हुने नोट गणना गर्नुअघि डिसइन्फेक्सन गराउन अनिवार्य रूपमा स्प्रे गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सेवाग्राहीहरूमा समेत दूरी कायम गर्नका लागि रेखांकन तथा क्यू रडको तत्काल व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीले समेत अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका कामहरूका लागि कसैस“ग भेटघाट नगर्न मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना कति ?
मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला आएपछि....
ओली सरकार धरमर बन्यो